Soo dejiso waraaqaha sawirada ee cusub ee OnePlus Nord | Androidsis
Kuwo badan ayaa adeegsadayaasha ah ee jecel inay adeegsadaan sawir-gacmeedyo kala duwan, si taleefanku uusan u dareemin caajis. Dukaanka Play-ka waxaan ku haynaa codsiyo fara badan oo noo oggolaanaya inaan si toos ah u beddeleyno gidaarka si toos ah u beddel gidaarka, oo ah xalka Google iyo Microsoft kuwa na siiya natiijooyinka ugu fiican.
Si kastaba ha noqotee, waxay u egtahay in sawirada noocan ahi aysan ahayn sidaad jeceshahay, oo waxa aad runtii jeceshahay ayaa ah inaad ku raaxeysato waraaqaha cusub ee lagu bilaabay terminal kasta oo cusub oo suuqa ku dhaca. Markii ugu dambeysay ee sidaas la sameeyo, ugu yaraan si rasmi ah loo soo bandhigo, waa OnePlus Nord, oo ah terminal loogu talagalay dhammaan jeebabka iyo kaas oo OnePlus uu asalkiisii ​​ku soo noqday.
Sida caadiga ah, oo la sii daayo kasta oo cusub, waxay soo bandhigeysaa noocyo badan oo sawir-gacmeedyo cusub ah, sawir-gacmeedyo loogu talagalay inay soo saaraan tayada shaashaddaada iyo naqshadeeda. Ururinta cusub ee darbiyada ee ka imanaya gacanta OnePlus Nord ayaa na siinaya swirls dhaqameed iyo qaabab muuqda in soosaarayaasha badankood isticmaalaan.
Sawirada gaarka ah ee loo yaqaan 'OnePlus Nord wallpapers' waxay ku dartaa wadar ahaan 8 oo waxay kaga duwan tahay waraaqaha kale ee sawirada kuwaas oo u muuqda kuwo aad u macquul ah oo tus qaar ka mid ah kuwa Google Waxay nagu siisaa qalabka Pixel iyo iyada oo loo marayo arjiga waraaqaha ee ay u diyaarin karto isticmaale kasta iyada oo loo marayo Play Store.
Mar labaad, ka dambeeya naqshadaha sawir-qaadayaashan cusub waa Hampus Olsson, oo mas'uulka ka ah sameynta sawirrada cusub ee OnePlus ay ku dartay ficil ahaan dhammaan boosteejooyinka ay ka furtay suuqa sannadihii u dambeeyay. Waraaqahaas waan awoodnaa ku soo dejiso xalka asalka ah (2.400 × 1.080) iyada oo loo marayo iskuxirahan Google Drive.ku xir Google Drive.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » OnePlus » Soo dejiso waraaqaha sawirada ee 'OnePlus Nord' cusub